အလိုအလျောက်စားနပ်ရိက္ခာစက်၊ အစားအစာစက် - Chenpin
CHENPIN FOOD MACHINE CO ။ LTD
အလိုအလျောက် Flatbread ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
CPE-800 အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် Flatbread လိုင်း
Tortilla ထုတ်လုပ်ရေးစက် CPE-800
Roti ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-800
Chapati ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-800
Lavash ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-800
Burrito ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-800
CPE-620 ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Flatbread လိုင်း
Tortilla ထုတ်လုပ်ရေးစက် CPE-620
Roti ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-620
Chapati ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-620
Lavash ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-620
Burrito ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-620
Tortilla ထုတ်လုပ်ရေးစက် CPE-400
Roti ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-400
Chapati ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-400
Lavash ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-400
Burrito ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက် CPE-400
အလိုအလျောက် Lacha Paratha ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
CPE-3268 Lacha Paratha ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်
CPE-3000L အလွှာ / Lacha Paratha ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်
CPE-788B Paratha နှိပ်၍ ရိုက်စက်
အလိုအလျောက် Ciabatta / Baguette ပေါင်မုန့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
မုန့်စိမ်း Laminator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်
Pie & Quiche ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်
Spiral Pie ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူ
အလိုအလျောက် Tortilla ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အလိုအလျောက်မုန့်စိမ်း Laminator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်
အလိုအလျောက် Round Crepe ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အလိုအလျောက် Pie & Quiche ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အလိုအလျောက်လိမ် Pie ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အလိုအလျောက် Bean ကို Pie ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Palmier / လိပ်ပြာ pastry
Bean Red / Apple Pie
ChenPin သည်မုန့်စိမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ပရိုဂရမ်အလိုအလျှောက်စက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ISO9001 ၏နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်။
အလိုအလျောက် Lacha Paratha ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - ChenPin အစားအစာစက်
ဤအပြည့်အဝအလိုအလျောက် lacha ထုတ်လုပ်မှုကို Chenpin Food Machinery Co. , Ltd. မှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည်။ စက်သတ်မှတ်ချက်များ - အရှည် ၂၅၃၀၀ * အကျယ် ၁၀၅၀ * အမြင့် ၂၄၀၀mm ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း - ...
အလိုအလျောက် Puff Pastry အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ဖောက်သည်အတော်များများကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် puff pastry အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမေးမြန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းဆက်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ Chenpin ၏အယ်ဒီတာသည်အီး ...
ဖက်စ်: +86 21 57674551 # 816
အဓိကကုန်ပစ္စည်း (အသေးစိတ်→လေ့လာသင်ယူဖို့ကိုနှိပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. ): အလိုအလျောက် Tortilla Flatbread ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အလိုအလျောက် Lacha Paratha ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အလိုအလျောက်ပီဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အလိုအလျောက် Ciabatta / Baguette ပေါင်မုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အလိုအလျောက်မုန့်စိမ်းလမိုင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အလိုအလျောက်က Round Crepe ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, အလိုအလျောက် Pie & Quiche ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း၊ အလိုအလျောက်လိမ်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
© Copyright - 2010-2021 : All Rights Reserved. Hot ထုတ်ကုန်များ - Sitemap
Automatic Dough Laminator Machine, Dough Laminator Machine, Dough Laminator Line, အလိုအလျောက် Lacha Paratha ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, Dough Laminator Production Line, Croissant Lamination Machine,